एमाले महाधिवेशन : चार आश्चर्य - विचार - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन : चार आश्चर्य
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सपनाहरूलाई गैंडा र ओलीमा लगेर केन्द्रित गर्नुजस्तो गैरमाक्र्सवादी र सी–ग्रेड सोच अर्को के हुन्छ ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर, किसानहरूको सपनालाई ‘राइनोको मस्कट’ बनाएर खेलाँची गर्छ भने, योभन्दा ठूलो ‘जोक’ के हुन्छ ?
मंसिर ६, २०७८ केशव दाहाल
कुनै बेला एमालेका महाधिवेशनहरूले नेपाली राजनीतिलाई महिनौं तरंगित पार्थे । पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, मुद्दा र कार्यक्रमहरूमाथि सघन छलफलहरू चल्थे । पार्टी सदस्यहरूका लागि त यस्ता अवसरहरू प्रेरणादायी हुन्थे नै, विरोधीहरूसमेत बहसमा अनिवार्य तानिन्थे । तलतलसम्म दस्तावेजहरू पुग्थे ।
साथै, त्यही अवसरमा प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचन हुन्थ्यो, जसलाई हेरेर राजनीतिक सृजनशीलता र जडताका अनेकौं अनुभव लिन सकिन्थ्यो । त्यो एक जमानाको कुरा थियो । तर अहिले ? अहिले एमालेको दसौं महाधिवेशन सन्मुखमा छ । यद्यपि तयारी हेर्दा, यो इतिहासकै सबैभन्दा अराजनीतिक, व्यक्तिकेन्द्रित, सन्दर्भहीन र भुत्ते हुने देखिँदै छ । लाग्छ, एमालेमा अब जीवनको गतिशीलता सकियो । आलोचनात्मक चेत सकियो । नेताहरूको वैचारिक सामथ्र्य सकियो । पार्टीमा सदस्य कम र सेवकहरू ज्यादा हावी हुँदै गए । के एमालेहरू मान्छेको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र गरिमामा भन्दा दासतामा धेरै विश्वास गर्छन् ? के एमालेमा जीवनको उज्यालो सकियो ? आज एमालेको आसन्न महाधिवेशन र यसका आश्चर्यजनक सन्दर्भहरूमाथि विमर्श गरौं ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई विचार, अनुभव र कार्यदिशाको एकमुस्ट अभिव्यक्ति मानिन्छ । त्यसरी नै तयारी गरिन्छ । त्यसरी नै प्रचार गरिन्छ । त्यसैको अभिव्यक्तिका लागि महाधिवेशनको लोगो बनाइन्छ । पार्टी कार्यालयहरू सजाइन्छन् । महाधिवेशनस्थल सिँगारिन्छ । दस्तावेजहरू छापिन्छन् । पर्चा, पोस्टर, परिचय कार्डहरू बन्छन् । सबै कुरामा विचारको संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । किनभने त्यसको प्रभावले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिमा नयाँ सपनाहरू जागृत हुन्छन् । चेतनाको नयाँ ज्योति बल्छ । यो प्रक्रियामा कम्युनिस्टहरू अझ सचेत हुन्छन् । भनिन्छ— कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रयोग हुने लोगो र झन्डामा पार्टीको सम्पूर्ण चेतना र सपना अभिव्यक्त हुन्छ । यो अर्थमा महाधिवेशनको लोगो र झन्डा विशेष हुन जान्छ, जो महाधिवेशनको विम्बात्मक तर केन्द्रीय अभिव्यक्ति हो ।
यो पटक एमालेले आफ्नो महाधिवेशनलाई कुनै वैचारिक परिघटनाका रूपमा प्रचार गरेको छैन । न विमर्श, न त बहस । त्यसैले उसले आफ्नो झन्डा किसान र मजदुरहरूका हातबाट खोसेर गैंडाको हातमा सुम्पिएको छ, जसमा न क्रान्तिको आह्वान छ, न त परिवर्तनको सपना । जहाँ जनताको भुइँ हिस्साको त झन् कतै संलग्नता नै छैन, जो धूलोमा परिश्रम गरिरहेको छ । यो पटक एमालेको झन्डा गैंडाले उचालेको छ । अन्यत्र जताततै छन् दौरा–सुरुवालमा सजिएका अध्यक्ष ओली । कापीमा, कलममा, भान्सामा, हलमा, ब्यानरमा, थालमा । अर्थात्, एमालेको महाधिवेशनमा या गैंडा छ, या त ओली छन् । यसको अर्थ के होला ? के यो महाधिवेशन ठोरीमा आयोजना भएको भए झन्डा भगवान् रामले उचाल्थे ? अथवा, के यो महाधिवेशन कोसीटप्पुमा गरिएको भए झन्डा अर्नाले उचाल्थ्यो ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सपनाहरूलाई गैंडा र ओलीमा लगेर केन्द्रित गर्नुजस्तो गैरमाक्र्सवादी र सी–ग्रेड सोच अर्को के हुन्छ ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर, किसानहरूको सपनालाई ‘राइनोको मस्कट’ बनाएर खेलाँची गर्छ भने, योभन्दा ठूलो ‘जोक’ के हुन्छ ? राइनो एक विम्ब मात्र हो । मुख्य कुरा हो— म्यासेज । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेनशनमा राजनीति नहुनु र मात्र रमझम हुनु चिन्ताको विषय हो । एउटा राजनीतिक दलले आम मान्छेका मुद्दाहरूलाई नदेख्नु र सम्पूर्ण प्रचार व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुभन्दा ठूलो राजनीतिक आश्चर्य के हुन्छ ?
कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनमा पार्टीले अंगीकार गर्ने सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जस्तो, एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, जसले नेपाली राजनीतिमै महत्त्वपूर्ण बहस सृजना गरेको थियो । र, त्यो बहस अझै जारी छ । त्योभन्दा अगाडि पनि एमालेमा अनेक बहस भएका थिए । तर एमालेको दसौं महाधिवेशन सुनसान छ, किन ? यस्तो लाग्छ, एमालेले वैचारिक मन्थनको संस्कृति अन्त्य गरेको छ । पार्टीमा विचार सकिएको छ र सत्ता हावी हुँदै गएको छ । कम्युनिस्ट (?) पार्टीमा विचारको अन्त्य हुनु र उखानटुक्काहरूले पकड जमाउनु कस्तो अश्चर्य †
एमालेको राजनीतिक जीवनमा पाँचौं महाधिवेशको विशेष स्थान छ । त्यसपछि महत्त्वपूर्ण छन् आठौं र नवौं महाधिवेशनहरू, जसले झन्डै पचास वर्ष लामो समाज विश्लेषणको निष्कर्षलाई बदलेका थिए । अर्थात्, नेपाली समाजको चरित्र कस्तो छ, मुद्दाहरू के छन् र तिनलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरित गर्ने भन्ने लामो बहसपछि एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट सामन्तवाद सकिएको र नेपालमा पुँजीवादी युग सुरु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । निष्कर्ष थियो— ‘यद्यपि हाम्रो पुँजीवाद दलाल पुँजीवाद हो । यसलाई उत्पादनशील पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्दै समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ ।’ यसो भनिरहँदा एमालेमा जबजलाई हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण थिए । एउटा समूह जबजको अन्धसमर्थक थियो, जसको नेतृत्व गर्थे केपी ओली । अर्को आलोचनात्मक समूह थियो, जसमा थिए माधव, झलनाथ र घनश्यामहरू । जबजका अन्धसमर्थकहरू यसलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त मान्नुपर्ने धारणा राख्थे, जसलाई उनीहरू बहसको प्रस्थानविन्दु नभई पूर्णता ठान्थे । उनीहरूका लागि जबज वेद, कुरान, बाइबल थियो । यसको ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ सम्म पनि फेर्नु हँुदैन भन्ने उनीहरूको मत थियो । यसको अर्थ हुन्थ्यो— जनवादी क्रान्ति अझै बाँकी छ । तर त्यसका आलोचकहरू जबजको युग सकिएको र अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने मत राख्थे । यो समूह जबजलाई अझ विकास गर्नुपर्ने ठान्थ्यो । महाधिवेशनले माधव, झलनाथ र घनश्यामहरूको विचार पारित गर्‍यो । नेतृत्वमा आए ओली । अत: एमाले र माओवादीको एकता हुँदा ओलीले नवौं महाधिवेशनको वैचारिक निष्कर्षलाई पूर्वाग्रहसाथ छोडिदिए । त्यसयता जेजे भयो, त्यो ताजै छ ।
नवौं महाधिवेशनपछि एमाले ओलीको अध्यक्षतामा अगाडि बढ्यो । माओवादीसँग एकता भयो । भारी बहुमतका साथ पार्टी सरकारमा गयो । ओली प्रधानमन्त्री भए । जनताको बहुदलीय जनवादलाई व्यवहारमा सिद्ध गर्ने अवसर स्वयं ओलीका हातमा आयो । तर दुर्भाग्य, जसै ओली सरकारमा गए, उनले पार्टीको विचार, कार्यक्रम, चुनावी घोषणापत्र सबै बिर्सिए । जबजले पार्टीभित्र र बाहिर कतै पनि नेतृत्व गर्न सकेन । पार्टीमा विचार कम र गुट ज्यादा देखिँदै गए । अनेक स्वार्थ प्रकट हुँदै गए । भ्रष्टाचार बढ्यो । सुशासन घट्यो । सरकारले परिणाम दिन सकेन । त्यसै मेसोमा आफ्नै आन्तरिक कारणले पार्टी फुट्यो । अर्थात्, दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । प्रदेशका सरकारहरू ढले । महत्त्वपूर्ण नेताहरूले पार्टी छोडे । पार्टी बदनाम भयो । जनताको खास हिस्सा असन्तुष्ट बन्दै गयो । यावत् संकटबाट गुज्रिएको एमालेमा यी प्रश्नहरू किन उठ्दैनन् ? आश्चर्य छ ।
किन यस्तो भयो ? दोष सिद्धान्तमा थियो कि व्यवहारमा ? दोष नेतृत्वमा थियो कि नीतिमा ? दोष प्रणालीमा थियो कि प्रयोगमा ? गणतान्त्रिक जनआन्दोलनपछिका पन्ध्र वर्ष किन खेर गए र राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवन किन बदल्न सकेन ? के यसरी समाजवाद आउँछ ? समग्र नेपाली राजनीति आज यिनै प्रश्नहरूले घेरिएको छ । यो अर्थमा एमालेको महाधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने यी निकै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न हुन् । तर यी विषयहरूमाथि न विधान महाधिवेशनमा छलफल भयो, न त चितवनमा हुँदै छ । आफैंमाथि निर्मम समीक्षा नगरी दोष अरूमा खोजेर एमाले कता जान्छ ?
निश्चय नै, एमाले शान्त छ । हेर्दा लाग्छ, आन्तरिक लफडाहरू सकिएका छन् । गुटहरू सकिएका छन् । कचकच सकिएको छ । नेताहरूलाई हाइसन्चो छ । तर घनश्यामहरूको खटपटी कहाँ व्यक्त हुन्छ ? भीम रावलहरूको अभिमत कसरी प्रकट हुन्छ ? बोल्नुपर्ने विषयहरू छोपछाप पारेर कसरी महाधिवेशन सकिन्छ ? ओलीमाथि आम रूपमा गरिएका आलोचनाहरूको जवाफ नखोजी दुनियाँसामु मुख कसरी देखाउने ? कार्यकर्ताहरूले चितवनमा भेला भई ठूलठूलो स्वरमा माधव नेपाललाई गाली गर्नु त स्वादै हुन्छ, तर त्यो मात्र आत्मरति हो । के त्यसरी महाधिवेशनको दायित्व पूरा हुन्छ ? ख्याल राखौं, राजनीतिक दायित्वबिनाको महाधिवेशन मात्र गाईजात्रा हो, जसले मनोरञ्जन त दिन्छ, तर इतिहासको भारी उठाउन सक्दैन ।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको भूमिका ज्यादै ठूलो हुन्छ । यसर्थ नै पार्टीहरूमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विधि, प्रक्रिया र उपस्थिति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जो आफैंमा लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुनुपर्छ । तर अहिले एमालेभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत गर्ने जोडदार अभियान चलेको छ । परिणाम, तलतल सहमतिका अनेक बैठक हुँदै छन् । हेर्दा राम्रो लाग्ला । ‘सर्वसम्मत’ आफैंमा गज्जबको शब्द हो । तर सर्वसम्मत बनाउने नाममा एमालेभित्र इतिहासमै पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै केन्द्रीयता हावी हुँदै छ । नेतृत्वले जताततै हस्तक्षेप गर्दै छ । मुख्यत: पाँचौं महाधिवेशनबाट पार्टीले सुरु गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास पच्चीस वर्षपछि अन्त्य हुँदै छ । अर्थात्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत बनाउने नाममा संगठित सदस्यहरूको हक खोसिँदै छ । यो हेर्दा साधारण लाग्छ, तर यसले एमालेका आठ लाख सदस्यको सार्वभौमिकता समाप्त बनाउँदै छ । सदस्यहरूलाई मात्र संख्यामा गणना गर्ने तर उनीहरूलाई सचेत र जीवन्त कार्यकर्ताको दर्जा नदिने यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।
त्यसो त नेतृत्व छनोटमा पनि एमालेभित्र प्राधिकार हावी हुँदै छ । अर्थात्, ओली । पार्टी संगठनलाई नदीजस्तो चलायमान गर्नु आजको आवश्यकता हो । र, ताजा नेतृत्वको सम्भावनालाई राजनीतिक दलहरूले सदैव खुला राख्नुपर्छ । तर एमालेभित्र पुराना मान्छेहरूको वर्चस्वलाई ओली कमरेडको तजबिजमा मिलाइँदै छ । कसैको तजबिजले बनेको नेतृत्व कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ ? भन्नुपर्दैन ।
कुनै बेला एमालेमा ‘पुस्ता हस्तान्तरण’ को विषय निकै चर्चामा थियो । तर त्यो अहिले सामसुम छ । अर्थात्, स्वयं त्यसका अभियन्ताहरू मौन छन् । या त उनीहरूमा त्रास छ, अथवा लोभ । त्यसैले उनीहरू अहिले चाकडीमा छन् । अध्यक्ष ओलीको आशीर्वादमा आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्न खोज्ने यो प्रवृत्तिबाट दीक्षित एमालेको नयाँ पुस्ता कस्तो होला ? सहभागितामूलक लोकतन्त्र, गतिशील नेतृत्व, नो भोट, एक व्यक्ति दुई कार्यकालजस्ता विषयहरू आम बहसमा आइरहेका बेला एमाले स्वयं भने उल्टो बाटोमा देखिनु कस्तो दुर्भाग्य † राजनीतिलाई अझ धेरै सामूहिक, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला एमाले कार्यकर्ताहरूले आफ्नो लोकतन्त्रलाई व्यक्तिको पाउमा टक्य्राउनुजस्तो उल्टो र आश्चर्यजनक काम अर्को के हुन्छ ?
या त आफैंभित्रका आश्चर्यहरूलाई नदेख्नु या त्यसैमा रमाउनु एमालेको चौथो आश्चर्य हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यत्रो आक्रमण भैरहँदा एमाले किन चुपचाप ? पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले किन परिणाम दिइरहेको छैन ? भुइँ किन असन्तुष्ट छ ? एउटा राजा फालेर ल्याइएको गणतन्त्रले किन सयौं राजा जन्मायो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नै दुष्कर्मले कतै बदनाम त गर्दै छैन ? राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व लिने र जनताको अवस्था बदल्ने प्रयत्नमा एमालेको प्रतिबद्धता खोइ ? के यी प्रश्नहरूको अर्थ र औचित्य सकियो ?
राजनीतिक नैतिकताको स्खलन आजको ठूलो समस्या हो । विश्लेषकहरू भन्छन्— यो विकृतिको नेतृत्व स्वयं एमालेले गरिरहेको छ । स्वयं कम्युनिस्टहरूमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको असीमित भोक देखिँदै छ । कतै पनि सांस्कृतिक उन्नयन, उदारता, निष्ठा र सरलता छैन । राज्यका अंगअंगमा दलालहरू हावी हुँदै गए । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका एजेन्डाहरू हराए; हावी भए स्वार्थका भालेहरू । पार्टी कार्यालयहरू लोकतन्त्रका मन्दिर बन्नुपर्ने, लालदरबार बन्न पुगे । एउटा समाजवादी पार्टीले यो विषयमा चिन्ता गर्नु पर्दैन ? खै, एमालेका सदस्यहरूमा यसको चिन्ता र चासो ?
सर्वत्र गुनासो छ, राजनीति गतिशील भएन । गतिशील हुनुको अर्थ युगको नेतृत्व गर्नु हो । गतिशील हुनुको अर्थ विचार, संगठन, मुद्दा, संस्कृति र सपनाहरूमा नयाँपन हो । गतिशील हुनुको अर्थ अझ धेरै लोकतान्त्रिक र अग्रगामी हुनु हो । तर एमाले कसरी उल्टो बाटो हिँड्न पुग्यो ? समय–चेतना, संकल्प र गति खै ? व्यवस्था बदलियो तर पार्टी बदलिएन । किन यस्तो भयो ? के यावत् विषयपट्टि आँखा चिम्लिएर ‘आई लभ यु’ को नाराले देश बन्छ ?
अहिले एमालेमा रमाइलै होला । अध्यक्ष ओलीका चुड्किलाहरू सर्वत्र छन् । हाँस्न पाइएकै छ । सभाहरू भएकै छन् । पैसा उठेकै छ । पार्टीसत्तामा रजगज छ । तर गाली गर्नु, हाँस्नु, रमाउनु र राजनीति गर्नु सायदै फरक कुरा हो । बितेका तीस वर्ष एमालेले सत्तामा बसेर के गर्‍यो ? र, अब उसले आफ्नो राजनीतिक औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ ? एमालेले आफ्नो महाधिवेशनलाई प्रहसन मात्र नबनाओस् । अन्यथा यो अपराधका लागि उसले कुनै दिन इतिहाससँग क्षमा माग्ने अवसर पनि पाउनेछैन ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७८ २१:४४
ढक ढक चाल
जुनजुन देश आज सफलताको शिखरमा छन्, तिनको विकासको रहस्य के होला ?मलेसियालाई बीस वर्षमा विकासको नयाँ उचाइ दिएका महाथिर मोहम्मदले कुनै बेला काठमाडौंमा भनेका थिए, ‘राजनीतिक स्थायित्व, परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता, नेतृत्वको मिहिनेत र संकल्प ।’
कार्तिक २२, २०७८ केशव दाहाल
काठमाडौँ — अवसरको कुरा पुराना मान्छेहरू भन्छन्— जिन्दगीमा भाग्यले एकपटक ढोका ढकढकाउँछ । ढोका खुल्यो, भाग्य चम्कियो । कथंकदाचित् अल्छी गरेर समयमै ढोका खोलिएन भने, निमेषमै भाग्य अर्को ढोका ढकढकाउन पुगिसक्छ । त्यसपछि सायदै त्यो क्षण फर्किएर आउला । यसैलाई शास्त्रमा भाग्यको खेल भनिन्छ । यहाँ भाग्यलाई अवसर भन्ने बुझौं । जसलाई राजनीतिमा भनिन्छ— ऐतिहासिक अवसर ।
मान्छेको जस्तै हुन्छ देशको भाग्य । अर्थात्, देशको मूलद्वारमा चाल गर्न आउने अवसरहरू पनि उस्तै चञ्चल हुन्छन् । जो मात्र एकपटक आउछन्, एक युगमा । गुमेपछि गुम्यो–गुम्यो । गुमेको भाग्य फर्किएर आउन अनेकौं दिन, महिना र वर्ष कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्थात्, पटक–पटक भाग्यले ढोका ढकढकाउँदैन । हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ, जुनजुन देशहरू आज सफलताको शिखरमा छन् तिनीहरूले समयमै भाग्यको चालसुने, ढोका खोले र विकासको शिखर चुमे । चीन । मलेसिया । सिंगापुर । जापान । अमेरिका । अर्थात्, विकसित अनेकौं मुलुक ।
इतिहास रोचक हुन्छ, जस्तो अमेरिका । सन् १७७६ सम्म अमेरिका स्वयं उपनिवेशमा थियो । स्वतन्त्रतासँगै अमेरिकाले अनेक अप्ठ्यारालाई विरासतमा पायो । उसका सामु राज्य निर्माणका युगीन चुनौतीहरू थिए । थिए, शासकीय संरचना र चरित्र निर्माणगर्ने दायित्वहरू । त्यहाँ संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई मान्छेको जीवनसँग जोड्नु त थियो नै, साथमा थिए आर्थिक–सामाजिक चुनौतीका पत्रपत्र । जस्तो दास विद्रोह, आर्थिक संकट र निराशा ।
सन् १८६१–६५ मा अमेरिकाले ठूलो गृहयुद्धनै बेहोर्‍यो । तर संकट र निराशालाई अमेरिकी नेतृत्वले आशा र अवसरमा बदल्यो । जर्ज वासिङ्टन, थोमस जेफर्सन, फ्रयान्कलिन रुजवेल्ट र अब्राहम लिंकनजस्ता नेताहरूले चुनौतीको चिसो सुरुङभित्र अवसरको उज्यालो देखे । अर्थात्, अँध्यारोमा दियोझैं बलिरहेको उज्यालो । भाग्यले ढोकामा सुस्तसुस्त चाल मारिरहेको थियो । त्यो संगीत उनीहरूले सुने । परिणाम, एकशताब्दीमै अमेरिका शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भयो । ऊ शून्यबाट शिखरमा पुग्यो । दुईशताब्दीपछि आज अमेरिकाको इतिहास पढ्दा लाग्छ— ‘असम्भव केही पनि छैन ।’
सफलताका कथाहरू यत्रतत्र छन्, जस्तो चीन । अध्यक्ष माओले जनवादी क्रान्ति सम्पन्नगर्दा चीन निकै जर्जर थियो । आन्तरिक युद्ध, गरिबी, भोकमरी र वैदेशिक आक्रमण । सांस्कृतिक क्रान्तिताका चीनको जनजीवन अझ विशृंखलित र निराश थियो । तर जसै नेतृत्वमा देङस्याओपिङ आए, उनले आफ्ना अगाडि अवसरका थाकहरू देखे । विस्तारै कुरा फेरिँदै गयो । र, सांस्कृतिक क्रान्तिपछिका बीस वर्षमा चीनको आर्थिकवृद्धि लगभग तीन गुणाले बढ्यो । अर्को तीसवर्षमा चीन संसारको दोस्रोठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । चीनसँग आज रफ्तार मात्र छैन, उसका चालहरू कलात्मक र सशक्त पनि छन् । आजकल चीन विकासका परियोजनाहरू बनाउँदैन । ऊ विकासको रचनागर्छ । जस्तो कि पृथ्वी नाम गरेको ठूलो क्यानभास छ । त्यो क्यानभासमा चीन छ । र, चीनका इन्जिनियरहरू त्यहाँ विकासका चित्रहरू कोर्दै छन् । कतै रेखा कोरिँदैछ । कतै रंग भरिँदैछ । कतै जग हालिँदै छ । त्यसैले आज चीनसँग छ विकासको भव्यतम बगैंचा ।
जापानको कुरापनि उस्तै रोचक छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान तहसनहस भयो । सन् १९४५ अगस्टमा लिटिल ब्वाईहरूले हिरोसिमा र नागासाकीलाई खरानी बनाए । जुन त्रासदीमा दुईलाख बीसहजार मान्छेहरू मारिए । तर जापान त्यही खरानीको जगमा उठ्यो । त्यसपछिका बीस वर्षभित्रै जापानले आफ्नो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्‍यो ।
एसियाकै मलेसिया, सिंगापुर र भियतनाम समृद्धिका थप उदाहरणहरू हुन् । जोसँग सुनाउन अनेकौं उत्प्रेरक कथा छन् । केही दशकअगाडिसम्म विदेशी हस्तक्षेप, आन्तरिक टकराव र गरिबीको चपेटामा फसेको मलेसियालाई महाथिर मोहम्मदले बीस वर्षमा विकासको नयाँ उचाइ दिए । आज मलेसिया लाखौं नेपालीको श्रम गन्तव्य बनेको छ । स्वराज प्राप्त गरेको तीस वर्षमै भारत विश्वको महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्यो । सन् १९६५ मा स्वतन्त्र हुँदाको कमजोर र परित्यक्त सिंगापुर बीसवर्षमा बाघझैं जुरुक्क उठ्यो र अगाडि बढ्यो । उता भियतनाम छ, जसले कुनैबेला (सन् १९४५–७५) अमेरिकासँग कठिनतम युद्ध लडेको थियो । तर युद्धपछि उसले ठूलो सावधानीसाथ आफूलाई उठायो । आज भियतनाम धानको उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी मानिन्छ ।
विकासको कुरागर्दा स्वयं युरोप अर्को आश्चर्य हो । सन् १६८९ देखि १८१५ सम्म भएका बेलायत र फ्रान्सबीचका युद्धहरूले युरोपलाई तहसनहस पारेका थिए । तथ्यहरूले भन्छन्— सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको पहिलो विश्वयुद्धमा युरोपका एक करोड तीस लाख मान्छेहरू मारिए । दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलोभन्दा अझ भयंकर थियो । तर आफ्ना सहस्र प्रियजन गुमाएको युरोपले शोकलाई शक्तिमा बदल्यो । भनिन्छ— युरोपको समृद्धि रगत र आँसुको पोखरीमा फुलेको कमलजस्तै हो ।
निश्चयनै हाम्रो परिवेश फरक छ । हाम्रा सपनाहरू फरक छन् । तर इतिहासमा हामीले पनि त रगत र आँसु बगाएकै हौं । हाम्रो पोखरीमा चाहिँ कमल किन फुलेन ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । फरक राजनीतिक व्यवस्था, फरक संस्कृति र फरक परिवेशका उल्लिखित देशहरूको विकासको रहस्य के होला ? कुनैबेला काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै महाथिरले भनेका थिए, ‘राजनीतिक स्थायित्व, परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता, नेतृत्वको मिहिनेत र संकल्प ।’
चीनमा जनवाद (सन् १९४९), भारतमा स्वतन्त्रता (सन् १९४७) र नेपालमा प्रजातन्त्र (सन् १९५१) लगभग उस्तै समयमा भएका ऐतिहासिक बदलावहरू थिए । भनिन्छ, कुनैबेला एसियामै चीन, भारत, सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र नेपालको अवस्था उस्तै थियो । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै तिनीहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ छुट्यौं† किन हाम्रो भाग्यको ढोका खुलेन ?
ठीकैछ, २००७ र २०१५ सालमा हाम्रा आफ्नै सीमा थिए । अनुभवको सीमा थियो । स्रोतको सीमा थियो । परिवर्तनको चेतना सुदृढ थिएन । २०१७ सालमै पञ्चायत आयो र स्वतन्त्र सपनाहरूमाथि बलात् बन्देज लाग्यो । तर २०४६ र २०६३ सालमा प्राप्त अवसरहरू किन अलमलमा परे ? लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिका युगीन महिना र वर्षहरू किन सत्यानाश हुँदै छन् ? कतिपय मान्छेको मत छ, ती आन्दोलनहरू आफैंमा सफल आन्दोलन थिएनन् । अत: आन्दोलन अझै बाँकी छ । त्यसैले अलमल भयो । वस्तुत: यो बहानामात्र हो । सत्य के भने, संसारको कुनैपनि आन्दोलन त्यो समयको विशिष्ट सम्झौता हो । कुनैपनि आन्दोलनका परिणामहरू सर्वसम्मत, सार्वकालिक र शाश्वत हुँदैनन् । समाजमा अनेक स्वार्थको एकता र संघर्ष चलिरहन्छ । अत: आन्दोलन सकिएको अर्कोदिन फेरि नयाँ मुद्दाहरू आउँछन् । यसको अर्थ हो, प्रत्येक आन्दोलनले अवसरसँगै नयाँ मुद्दाको उत्खनन गर्छ । अत: सबैकुरा ठीकठाक भएपछि विकास गरौंला वा सबै द्वन्द्व सकिएपछि अघि बढौंला भन्नु बहाना मात्र हो ।
राजनीतिले प्रत्येक आन्दोलनलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ । नेतृत्वको कामनै त्यही हो । अमेरिकामा जसले स्वतन्त्रताको दियो बाल्यो, उसले अमेरिका बनाउन आधारहरू खडागर्‍यो । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिपछिको लाल अराजकतालाई सम्हाल्न तत्कालीन नेताहरूले कडा मिहिनेत गरे । परित्यक्त सिंगापुरलाई चम्काउन कुनैबेला ली क्वान युले जग हाले । तर हाम्रा बीपी, कृष्णप्रसाद, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, माधव, शेरबहादुर, प्रचण्ड, बाबुराम र खड्गप्रसादहरू कहाँ चुके ? हाम्रा नेताहरू नेपाली सन्दर्भका जर्ज वासिङ्टन, अब्राहम लिंकन, देङस्याओपिङ, मोहम्मद महाथिर र ली क्वान यु किन भएनन् ?
आजको प्रसंगमा विचारगर्दा, हाम्रो नेतृत्व (राजनीति) मा मुख्यत: चारखाले समस्या देखिन्छन् । पहिलो, सपना र संकल्पको सीमा । अर्थात्, हाम्रा नेताहरूमा समाजलाई रचनात्मक नेतृत्व दिने, देशको सपनासँग एकाकार हुने, समयको संगीत सुन्ने र परिवर्तनका पाइलाहरू चाल्ने क्षमता र संकल्प देखिएन । आफू सत्तामा पुग्ने सूत्र र षड्यन्त्रलाई नेताहरूले राजनीति बुझे । उनीहरूमा आन्दोलन र इतिहासलाई न्यायगर्ने कुनै उत्सुकता रहेन । सिर्जना कतै देखापरेन । सर्वत्र सत्यानाश हुँदा पनि चेत नखुल्ने बोधो ज्ञानले हाम्रा नेताहरूलाई अर्थहीन बनाइदियो ।
दोस्रो समस्या, परिवर्तनको औचित्य स्थापितगर्नमा देखिन्छ । २०४६ सालमा प्राप्तभएको प्रजातन्त्रलाई किन जोगाउन सकिएन ? कारण एउटै छ— प्रजातन्त्रले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सकेन । तत्कालीन कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेतृत्व जनताका सपनाहरू पूरागर्न असमर्थ रह्यो । यद्यपि २०४६ साललाई २०६३ सालमा अझ समुन्नत गरियो । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि किन परिणाम दिइरहेको छैन ? किनभने नेतृत्वले पछिल्ला परिवर्तनहरूको स्वामित्व लिन सकेन । उल्टो आफ्नै दुष्कर्मले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने काम पो हँुदैगयो । परिवर्तनको स्वामित्व लिने र जनताको अवस्था बदल्ने सचेत प्रतिबद्धता कतै देखिएन ।
तेस्रो समस्या, राजनीतिक नैतिकताको स्खलन हो । आज सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति नेतृत्वको कमजोरी बन्दैछ । राजनीतिमा सांस्कृतिक उन्नयन, उदारता, निष्ठा र सरलता हरायो । लोकतन्त्र आसेपासेहरूको कुत्सित स्वार्थमा फस्यो । राज्य अंगमा दलालहरू हाबीभए । दलाल पुँजीवाद । नेताहरूले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको एजेन्डालाई बिर्सिए । पार्टी कार्यालयहरू लोकतन्त्रका मन्दिर बन्नुपर्ने, जारशाही दरबार बन्नपुगे ।
चौथो समस्या, राजनीति गतिशील भएन । गतिशील हुनुको अर्थ युगको नेतृत्वगर्नु हो । गतिशील हुनुको अर्थ विचार, संगठन, मुद्दा, संस्कृति र सपनाहरूको पुनर्गठन गर्नु हो । गतिशील हुनुको अर्थ अग्रगामी हुनु हो । तर यहाँ समय–चेतना, संकल्प र गति कतै देखिएन । उही आग्रह–पूर्वाग्रह । उही तथ्यहीन तर्क । उही ढिपी । व्यवस्था बदलियो तर राजनीति बदलिएन । शासकीय संरचना बदलियो, तर चरित्र बदलिएन । अनेक रंग र रूपमा पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरह्यो । या त नयाँ राजाहरू देखा परे या पुराना राजाका सेवकहरू । ढोकामा अवसरहरू आए र गए, तिनको सुस्त चाल र लय कसैले सुनेन ।
त्यसैले अब समीक्षागर्ने बेला भयो ? अब प्रश्नगर्ने बेला भयो ? प्रश्नगर्नु पछाडि फर्किनु होइन । वस्तुत: जानु अगाडि नै छ । तर राजनीतिको यही चालामालाले हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्ला ? हामीले लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि तीन पुस्ता संघर्ष गर्‍यौं । व्यवस्था फेरियो, लोकतन्त्र आयो । तर भुइँमा परिवर्तन किन आएन ? भुइँ जनताको जीवनको प्रतीक हो । भुइँश्रमको प्रतीक हो । भुइँ गरिब, दलित, महिला, सीमान्त समुदाय र दु:खको प्रतीक हो । भुइँको जीवन कहिले फेरिएला ? ढोकामा अवसरले लगातार चाल गर्दै छ । ढकढकढक । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनेक अवसरहरू बोकेर हाम्रो ढोकामा उपस्थित छ । त्यसलाई सुनौं । भनिन्छ— हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरुहुन्छ । त्यसैले पाइला चाल्न ढिलो नगरौं । अन्यथा इतिहास निर्मोही हुन्छ, यसले कसैलाई पर्खिबस्दैन ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७८ २१:४१